Dad lagu Qab-qabtay Gudaha Kismaayo
Friday, May 24, 2013 Wakhtiga Geeska Afrika 20:27
Ciidamada wadajirka ah ee ku sugan Kismaayo ayaa qab-qabtay dad ku dhow 40-meeyo kuwaasoo lala xiriirinayo amni daro iyo xiriir ay la leeyihiin ururka al-Shabab.
Ugu yaraan 40 qof ayaa la sheegay in lagu qab-qabtay gudaha magaalada Kismaayo.
Dadkan oo ay qab-qabteen ciidamada dowladda iyo kuwa Kenya ayaa lala xiriirinayaa falal amni-darro oo magaalada ka dhacay tan iyo markii ciidamada wadajirka ah ay soo galeen Kismaayo.
Wararka ayaa sheegay in sidoo kale shalay magaalada lagu toogtay nin lagu tiriyay inuu ka tirsanaa ururka al-Shabaab.
Dhinaca kale, dowladda Maraykanka ayaa soo dhaweysay qabashada Kismaayo, waxayna ugu baaqday ciidamada ku sugan gudaha iyo hareeraha magaalada inay xushmeeyaan xuquuqda aadnaha iyo sharciyadda bini'aadanimo.
Ururka al-Shabaab ayaa iyagu ka hadlay kabixista Kismaayo, Afhayeenka ururkaasi Cali Dheere ayaa qiray in dagaallada looga awood-roonaaday kaddib markii sida uu sheegay ay isa soo bahaysteen ciidamo kale duwan.
Xaaladda Kismaayo ayaa degan, waxaase dadku si weyn u dhowrayaan sameynta maamul ay magaaladu yeelato.